Transit-nguva Ultrasonic Flowmeter Factory |China Transit-nguva Ultrasonic Flowmeter Manufacturers, Suppliers
Dual-channel Transit-Nguva Clamp Pa Ultrasonic Flowmeter TF1100-DC
TF1100-DC Dual-channel Wall-mounted Transit Time Ultrasonic Flowmeterinoshanda panzira yekufamba-nguva.Iyo clamp-on ultrasonic transducers (sensors) yakaiswa pamusoro pekunze kwepombi kune isiri-invasive uye isingapindire kuyerera kweyero yemvura uye liquefied gasi mupombi yakazara yakazara..Mapeya maviri ematransducer anokwana kuvhara iyo inonyanya kuzivikanwa pombi dhayamita siyana.Pamusoro pezvo, kugona kwayo kuyera simba rekuyera simba kunoita kuti zvikwanise kuita ongororo yakazara yekushandiswa kwesimba rekupisa mune chero nzvimbo.
Transit-Nguva Multi-channel Insertion Ultrasonic Flowmeter TF1100-MI
1. Inoshanda pane akawanda chiteshi chekufamba-nguva musimboti.Kururama ndiko 0.5%.
2. Wide bi-directional Inoyerera yakawanda ye0.01 m/s kusvika 12 m/s.Kudzokororwa kuri pasi pe0.15%.
3. Kuderera kwekutanga kuyerera, super wide wide turndown ratio Q3: Q1 se400:1.
4. 3.6V 76Ah bhatiri simba rekupa, nehupenyu hwepamusoro pemakore gumi (kuyera kutenderera: 500ms).
5. Nekuchengetedza basa.Inogona kuchengetedza zvese kumberi kuyerera uye yekumashure data makore gumi (zuva, mwedzi, gore).
6. Kuiswa kwe-Hot-tapped, hapana mutsetse wepombi inoyerera yakakanganiswa.
7. Kubuda kwakarongeka ndeye RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM inogona kusarudzwa.
8. Zviteshi zviviri uye zviteshi zvina zvinogona kusarudzwa.
Handheld Transit-nguva Ultrasonic Flowmeter TF1100-EH&TF1100-CH
TF1100-CH Handheld Ultrasonic Flow Meterinoshanda panzira yekufamba-nguva.Iyo clamp-on ultrasonic transducers (sensors) yakaiswa pamusoro pekunze kwepombi kune isiri-invasive uye isingapindire inoyerera kuyerwa kwemvura uye liquefied gasi mupombi yakazara yakazara.Matatu mapeya ematransducer anokwana kuvhara iyo yakajairika pombi dhayamita renji.
Mushandisi anogona kushandisa ruoko kubata pamwe nekushandisa yekuyerera mita main unit.Iyi inoshanduka uye iri nyore kushandisa yekuyerera mita ndiyo yakanakira tsigiro yebasa uye mabasa ekugadzirisa.Inogona zvakare kushandiswa kutonga kana kunyangwe kutsiva kwechinguvana kwemamita akaiswa zvachose.
TF1100-EI yekufambisa-nguva Insertion ultrasonic flowmeter inopa akawanda masimba ekwakaringana kuyerera kwemvura kuyerwa kubva kunze kwepombi.Inoshandisa mamiriro-e-the-art matekinoroji pane ultrasonic kutapurirana / kugamuchira, dhijitari chiratidzo chekugadzirisa uye yekufambisa-nguva kuyerwa.Iyo proprietary chiratidzo chemhando yekutevera uye yekuzvigadzirisa tekinoroji inobvumira sisitimu kuti inyatso kuenderana kune akasiyana pombi zvinhu otomatiki.Nekuda kwekupisa-tapped mounting yekuisa transducers, hapana ultrasonic compound uye coupling dambudziko;Kunyange zvazvo ma-transducers akaiswa mumadziro epombi, haapindi mukuyerera, saka, haakonzeri kukanganisa kana kudonhedza kudonha pakuyerera.Iyo yekuisa (wetted) mhando ine mukana wekugadzikana kwenguva refu uye nekururama kuri nani.
Iyo clamp-on ultrasonic transducers (sensors) yakaiswa pamusoro pekunze kwepombi kune isiri-invasive uye isingapindire inoyerera kuyerwa kwemvura uye liquefied gasi mupombi yakazara yakazara.Matatu mapeya ematransducer anokwana kuvhara iyo yakajairika pombi dhayamita renji.Pamusoro pezvo, kugona kwayo kuyera simba rekuyera simba kunoita kuti zvikwanise kuita ongororo yakazara yekushandiswa kwesimba rekupisa mune chero nzvimbo.